Sida loo Beddelaan iyo Guba AVCHD in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan AVCHD in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
"Waxaan videos qoyska gaaban badan oo aan drive Sony HDR-SR1 adag oo dhammaantood waa qaab AVCHD. Hadda waxaan doonayaa inaan gubi videos AVCHD si aad DVD in gurmad kuwaas videos qaali ah qoyska. Sidee i kartaa gubi AVCHD in DVD si ay u ka ciyaari karaa ciyaaryahan DVD caadiga ah? "
Dad badan ayaa qasan oo ku saabsan sida loo badalo AVCHD in DVD . Dhab ahaantii, waxaad u baahan tahay oo dhan waa adag ah oo si sahlan loo isticmaali DVD gubi si loogu badalo files AVCHD in qaab DVD ah ee loo maqli karo ee ciyaaryahan DVD caadiga ah. Si taas loo sameeyo shaqadaan, waxaan ugu Wondershare naturually talinaynaa DVD Creator (Windows 8 taageeray) iyo DVD Creator for Mac (Mountain Libaaxa taageeray). Iyadoo DVD gaare tan, waxaad si fudud u gubi kara oo dhan loo jecel yahay videos, duubey, iyo sawiro si DVD leh tayo wanaagsan leh. Waa maxay dheeraad ah, hawlaha tafatirka sim iyo arrimo menu ka caawin kartaa inay taabtaan ilaa DVD video aad dhakhso leh. Download version saxda ah sida uu nidaamka qalliinka iyo ku dhex socdo hage ku faahfaahsan qormooyinka hoose.
Download AVCHD in DVD Converter ay gubaan DVD disc caadiga ah.
Fiiro gaar ah: Hoos hage qaadataa ugu Screenshot Windows. Haddii aad rabto in diinta AVCHD in DVD ee Mac, fadlan tixraac hage dadka isticmaala Mac ' .
1 AVCHD Transfer videos in computer
Videos AVCHD lagu duubay saxaafada badan oo kala duwan, oo ay ka mid adag drive, flash drive, DVD, iwm Hoos waxaa ku qoran hababka guud si ay u gudbiyaan AVCHD video files si computer.
Hard Drive fiidiyo : Just shaqeeyaa drive sida adag ee your computer. Sida caadiga ah wuxuu isticmaalayaa USB cable / FireWire / HDMI si ay u gudbiyaan videos AVCHD in drive computer ee adag.
Flash Drive fiidiyo : Isticmaala cable USB u dhisay-in Flash fiidiyo xasuusta halka aqriyaha kaarka kaarka SD dibadda ama kaarka MemoryStick.
DVD fiidiyo : fiidiyo Qaar ka mid ah AVCHD in DVD gubi karaa video, taas oo la ciyaari karay la DVD guriga ciyaaryahanka. Waxaad u baahan tahay a Converter Video si ay u gudbiyaan kuwa taariikhqorihii video in computer.
Videos AVCHD caadiga ah waxay leeyihiin externsion filename ee M2TS, M2T, ama MTS. Riix 'Import' in lagu daro videos AVCHD on videos computer ama jiitaa ay barnaamijka uga soo File Explorer. Marka dhamaystiran, ku eegaan videos ee suuqa kala xaq u arkaysid ah. On the suuqa kala isha midig, waxaad xor u tahay abaabulo si videos iyo titlesets dhigay. Keenista Photo waxa kale oo ay taageerayaan in ay sameeyaan filim slideshow la sawiro fiidiyo ah si ay u gubaan in DVD.
3 videos Edit AVCHD iyo astaysto DVD bedeley (optional)
Wondershare DVD Creator (Windows 8 taageeray) aad u saamaxaaya in ay noola iyo jar videos in ay diiradda saaraan qaybo dhawr ah, isku shaandheyn videos iyo qabsato saamaynta video loo gaaro waxtarka fiican muuqaal ah, ku dar watermarks in lagu muujiyo weraro, iwm
DVD menu waa mid ikhtiyaari ah u DVD. Si kastaba ha ahaatee, DVD menu ah ka dhigi doonaa content aad video fiican u abaabulan. gubi AVCHD waxa uu bixinayaa 50 + diyaarsan in la isticmaalo arrimo, kaliya soo qaado aad ugu jeceshahay oo dheeraad ah u astaysto. Waayo, DVD menu shakhsi, waxaad bedeli kartaa badhamada menu, thumbnails, dari music soo jeeda, caadadii background image, iwm
4 gubashadii Start AVCHD
Hadda waxaad ku eegaan kartaa mashruuca DVD movie oo dhan si loo hubiyo in wax walba waa qumman yahay. Haddii ay sidaas tahay, geliso disc maran DVD galay DVD drive, iyo bedesho "Guba" tab. Waxaad samayn kartaa dhowr goobaha waxaa ka hor inta aadan bilaabin in ay qoraan files AVCHD in DVD. Dooro qaab saarka ka "Guba in" liiska oo ku dhacay "Ka bilow" badhanka.
Qabtay. Iyadoo qasabno yar, waxaad samayn kartaa DVD ka files AVCHD la bedeley DVD qurux badan oo il-qabad saamaynta video. Just raaxaysan videos AVCHD iyo filimaan ku saabsan weyn shaashadda TV!
Daawo video ah tutorial tallaabo-tallaabo hoos ku qoran:
Badan oo ku saabsan AVCHD
AVCHD (Advanced Video sireed High Qeexid) waa qaab u duubo oo loo maqli karo ee qeexidda video sare. Fiidiyo High Qeexid (sidoo kale loo magacaabay fiidiyo AVCHD la 720p ama 1080p) ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan oo caan ah tan iyo markii ay ku siinaysaa users Raaxo fiican muuqaal ah. Sida abuuray ee AVCHD, Panasonic iyo Sony ayaa dooneysa in ay taageeraan files AVCHD loo maqli karo in ciyaartoyda ay Blu-ray. The kordhin file AVCHD noqon kartaa .mts, .m2ts, .tp, .mod, .trp, iwm diiwaanka AVCHD video at kala duwan oo ay ka mid yihiin qaraarada 1080p, 1080i iyo 720p. Marka AVCHD in DVD gubanaya, dooro "High Quality" in xuduudaheedu ku gubanayso si loo hubiyo tayada video ah.
Free download DVD AVCHD Dajinta:
Sida loo Guba BBC iPlayer in DVD